Klever Uhlelo lwe-Blockchain Validators | Klever Ezezimali
Setha indawo yokuqinisekisa futhi ujwayelane ne- Klever Inethiwekhi
Ngemva kokusetha kabusha i-testnet, uzoba namahora angu-24 okusetha inodi yakho.
Ukuze uhlole izindlela zethu zokubamba, uzokwenza imisebenzi eyahlukene ukuyihlola Klever Iketanga.
Abaqinisekisi bazobamba iqhaza emisebenzini ehlukahlukene ukusiza ukwazisa Klever umphakathi njll.
Iqala ngomhlaka-1 Meyi
Klever I-testnet iwuchungechunge lwezinselele zokuncintisana lapho abaqinisekisi bengafunda khona, balungiselele, futhi bazuze amaphuzu ukuze balungiselele i-mainnet ezayo. I-testnet izohlukaniswa ngezigaba ezi-4, ngasinye sihlola isici esihlukile sokuqinisekisa nokuvikela Klever inethiwekhi ye-blockchain.
Isigaba Sokuqala - Ukugibela
Gcwalisa ifomu lethu lesicelo sokuqinisekisa elibonisa inhloso yakho yokusebenzisa indawo.
Gcwalisa IFOMU LAPHA
Ukuze uqedele lo msebenzi, abaqinisekisi kudingeka banikeze ulwazi mayelana nesiqinisekisi sabo. Ngaphezu kokuvumela i- Klever ithimba liyayazi inhloso yakho yokubamba iqhaza, likwengeza kunoma yikuphi Klever Uhlu lwemeyili ethile ye-TestNet.
Amafomu kufanele agcwaliswe ngokunembile. Iziqinisekisi ezihlinzeka ngedatha enembile futhi zijoyine Klever Iseva ye-Discord izokwengezwa kokunikezelwe Klever Isiteshi se-Testnet. Labo abagcwalisa ifomu futhi baqinisekise ukufinyelela esiteshini sokuhlukana komgunyazi bazothola amaphuzu agcwele.
Setha isiqinisekisi sakho
Inhloso yalo msebenzi iwukuba abaqinisekisi baqedele izinyathelo zokusetha inodi yabo, lokhu kuhlanganisa
Ukusethwa kokuqala kwe-node yakho ku-hardware ethembekile ozikhethele yona
I-Node ivunyelaniswe nenethiwekhi
I-Node ibhaliswe njengesiqinisekisi futhi iyakwazi ukukhiqiza amabhlokhi uma i-validator yakho ijika
Setha inodi yakho ngokuya ngemibhalo ehlinzekwe kuyo https://docs.klever.finance/klever-blockchain/how-to-run-a-node
Sizohlola ukuthi ikheli olihambisile likhiqize amabhulokhi yini. Amaphuzu agcwele uma i-node iphezulu, iyasebenza futhi ikhiqiza amabhulokhi uma kungukuphenduka kokuqinisekisa kwakho
Setha ukuqapha kwakho
Inhloso yalo msebenzi wukuba abaqinisekisayo babonise ukuthi ukuqapha kunikwe amandla. Iziqinisekisi zikhululekile ukusebenzisa noma yikuphi ukugada ozikhethele zona kodwa kufanele zibe nemininingwane eyanele ukusiza ukuqapha impilo ye-node.
Ukhululekile ukusetha ukuqapha kwenodi yakho nganoma iyiphi indlela oyithandayo.
Uzokwahlulelwa ngokwemibandela elandelayo
Ingxenye yamaphuzu uma unikeza kuphela ubufakazi (ukuthathwa kwesikrini) kokuqapha kwakho endaweni yakho
Amaphuzu agcwele uma uhlinzeka ngebhulogi evuliwe noma i-gitub repo ebonisa abanye abaqinisekisi ukuthi bafaka kanjani ukusetha kwakho kokuqapha
Bhala mayelana nokusetha isiqinisekisi sakho
Inhloso yalo msebenzi ukuthi abaqinisekisayo babelane ngolwazi oluhle mayelana nokusetha kwabo Klever I-node ye-Testnet.
Okuthunyelwe okubhaliwe esidlangalaleni kufanele kwenziwe mayelana nolwazi lwakho futhi kwabelwane ngezinkundla zokuxhumana ezifana ne-Twitter. Okuthunyelwe kufanele kube nemininingwane eyanele ukuze abanye bakwazi ukulandela indlela yokudala i-node.
Izokwahlulelwa ngokwemibandela elandelayo
Uhhafu wamaphuzu uma kubhalwe okuthunyelwe kuphela
Amaphuzu agcwele uma okuthunyelwe kubhaliwe futhi kwabelwana nge-Twitter kusetshenziswa eyethu Klever_io isibambo
Uma ngabe okuthunyelwe akucaci noma kube kafushane ungajeziswa ngamaphuzu
Tweet mayelana Klever ITestnet
Inhloso yalo msebenzi wukuba abaqinisekisi babhale ku-Twitter mayelana ne-Testnet nokubamba kwabo iqhaza ku-Testnet.
I-Tweet evela ku-akhawunti yakho ye-Twitter yokuqinisekisa, kufanele kube i-akhawunti yakho ye-Twitter. I-tweet kufanele ibonise ukubamba kwakho iqhaza kwakho kukho Klever I-Testnet, kufanele umake u-@klever_io ku-tweet yakho.
Amaphuzu aphelele we-tweet ukuthi
Umbhalo ukhombisa ukubamba iqhaza kwakho kukho Klever I-TestNet
Isithombe noma isixhumanisi esihlobene Klever I-TestNet
Uma kwenzeka i-tweet ingafinyeleli womathathu amaphuzu kuzokwabiwa amaphuzu anguziro
Phakathi nesigaba ngasinye, uzozuza amaphuzu ngokuqedela imisebenzi yenethiwekhi nomphakathi. Inani lamaphuzu elitholwa ngumqinisekisi isilinganiso sokulungela iziqinisekisi.
Isigaba sesibili - Ingqalasizinda
Isigaba sesibili se-incentivized testnet simayelana nengqalasizinda nokuhlolwa komthwalo.
Ngemva kokuthi i-testnet isethwe kabusha, uzoba namahora angu-24 okusetha inodi yakho yeSigaba sesi-2.
Setha indawo yakho futhi usayine phakathi kwezinsuku ezi-2
Ukuze uqedele lo msebenzi, abaqinisekisi kudingeka ukuthi basethe kabusha amanodi abo ngesikhathi zingakapheli izinsuku ezi-2.
Ngemva kokusetha kabusha i-Testnet, abaqinisekisi kufanele bakhe kabusha amanodi abo futhi bavumelanise kabusha. Ngaphezu kwalokho, kufanele bakhethwe kabusha. Abaqinisekisi ababuyisela izikhwama zabo zemali ezisetshenziswe ngaphambilini bazoba ngabokuqala ukuthola amathokheni e-testnet, futhi bazokwazi ukuba yiqhwa, bazithumele, futhi bamukele izithunywa ezisele ezizokhethwa.
Amaphuzu azobalwa ngedatha ye-on-chain kanye namakheli e-wallet kusukela kuSigaba 1.
Amanodi akhethiwe futhi aqinisekiswa ngempumelelo
Ezinsukwini zokuqala ezi-2 zokusetha kabusha i-Testnet, uzonikezwa amaphuzu agcwele
Ngosuku lwesi-3 lokusetha kabusha i-Testnet, uzoklonyeliswa uhhafu wamaphuzu
Ngemuva kosuku lwesi-4 lokusetha kabusha i-Testnet kuzonikezwa ikota yamaphuzu
Gcina u-80% wesikhathi sokuphumula ngesikhathi sokuqhuma komthwalo
Inhloso yalo msebenzi iwukuba iziqinisekisi zibe namanodi athembekile futhi zigcine isikhathi esingaphezu kwama-80%.
The Klever ithimba lizodala ukuqhuma kokulayisha ukuze lihlole inethiwekhi phakathi nokulayisha okuphezulu. Vama-alidator angakwazi ukugcina isikhathi azoboshwa ezingeni lephrothokholi.
Qinisekisa ukuthi inodi yakho iyakwazi ukugcina u-80% wesikhathi esengeziwe. Uma isiqinisekisi sinokugadwa okwanele endaweni yabo enengqalasizinda ethembekile lokhu kufanele kube lula uma kuqhathaniswa.
Isikhathi esiphezulu singaphezu kuka-80% futhi akazange aboshwe. Izothola amaphuzu agcwele.
Inhloso yalo msebenzi wukuba iziqinisekisi zibonise ukuthi ziyakwazi ukuthuthukisa ngesikhathi sokuphumula esincane.
Ngalesi sigaba i Klever ithimba lezobuchwepheshe lizohlinzeka ngezinyathelo zokuthuthukisa. Ukuthuthukiswa kulindeleke ukuthi kwenzeke ngesikhathi esinesikhathi esincane sokuphumula.
Iphuzu eligcwele lokuthuthukisa ngempumelelo phakathi kwezinsuku ezi-2 zesicelo sokuthuthukisa
Isicelo sokuthuthukiswa ngemva kwezinsuku ezimbili asifaneleki ukuthola amaphuzu
Bhala futhi ushicilele isihloko
Bhala futhi ushicilele indatshana yamagama angama-400-6000 ekhombisa ulwazi lwe Klever ubuchwepheshe kanye ne Klever i-ecosystem, iminikelo, imikhiqizo kanye nokuthi konke kuhlangana kanjani.
Bhala indatshana yakho bese uyishicilela endaweni yomphakathi oyikhethayo: ibhulogi yomuntu siqu, Medium, Discourse, Ghost, newsletter, njll. Yabelana ngalesi sihloko nge-twitter nomaki Klever_io
Uma ngabe okuthunyelwe akucacile noma kufushane kakhulu ungajeziswa ngamaphuzu
The Klever Ithimba lizohlinzeka bonke abaqinisekisi ngosekelo lwezobuchwepheshe esiteshini sethu se-Discord, izibuyekezo zolwazi lwamasonto onke, nezimemezelo zokuqalisa kwesigaba ngasinye.
Isigaba Sesithathu - Ukwesekwa Kokufinyelela
Setha indawo yakho futhi usayine phakathi kwezinsuku ezi-4
Ukuze uqedele lo msebenzi, abaqinisekisa kudingeka ukuthi basethe kabusha amanodi abo ngesikhathi zingakapheli izinsuku ezi-4. Lokhu kufanele kwenziwe ngemva kokusetha kabusha ngakunye.
Ezinsukwini zokuqala ezi-4 zokusetha kabusha i-Testnet, uzonikezwa amaphuzu agcwele
Amaphuzu azobalwa ngedatha ye-on-chain kanye namakheli e-wallet kusukela esigabeni 1.
Inhloso yalo msebenzi ukuthi abaqinisekisayo babe namanodi athembekile futhi bagcine ama-node ku-inthanethi ngaphandle kokuboshwa.
Qinisekisa ukuthi i-node yakho iyakwazi ukusebenza ngaphansi kwezimo ezinzile futhi ungaboshwa. Uma isiqinisekisi sinokugadwa okwanele endaweni yabo enengqalasizinda ethembekile lokhu kufanele kube lula uma kuqhathaniswa.
Ngenxa yokuthi i-testnet iyindawo yokufunda sizovumela ijele elingu-1. Izothola amaphuzu aphelele ejele elingu-0 noma eli-1. Lokhu akufaki amajele kunoma yiziphi izinselele zokuvumelana kwenethiwekhi ku-testnet
Thumela KLV Amathokheni okungenani kwabanye abaqinisekisi ababili
Inhloso yalo msebenzi ukuthi abaqinisekisayo bafunde ukuphathisa abanye ngesikhwama semali.
Phakathi nalesi sigaba udinga ukusebenzisa i-testnet KLV ukuthumela kwabanye abaqinisekisi. Inani le KLV zingahluka. Nokho silindele izithunywa ezimbalwa ukuthi zihlole ukuguquguquka kwesiteki.
Uhhafu wamaphuzu wokuthunyelwa okungu-2 kwabanye abaqinisekisi ababili
Amaphuzu aphelele okuthunyelwa kwezithunywa ezingaphezu kwe-10 kwabanye abaqinisekisi abaningi
Funa Imiklomelo Yenodi
Inhloso yalo msebenzi iwukuba abaqinisekisayo bafunde indlela yokufuna imiklomelo yama-node.
Uhhafu wamaphuzu okufuna kanye
Amaphuzu agcwele ezimangalo ezingaphezu kwezi-5
Abaqinisekisi bayakhuthazwa ukuthi bahlangane emphakathini, basakaze izwi, futhi bathole abaqinisekisi abaningi ngangokunokwenzeka ababambe iqhaza empini.
Okubhalwe ngezansi ama-blockchain esiwasekelayo
Idume Ngama-Cryptocurrencies angaphezu kuka-10,000+